ဘဝမှတ်တိုင်: Android ဖုန်းမှာScreenshot လွယ်လွယ်ကူကိူရိုက်မယ် ဆိုရင် Easyscreenshot V1.1.58
Android ဖုန်းမှာScreenshot လွယ်လွယ်ကူကိူရိုက်မယ် ဆိုရင် Easyscreenshot V1.1.58
အခု့ ကျနော် ပေးချင်တာကတော့ အသစ်မဟုတ်ပေမယ့် တခါတရံမှာ Android user တွေ
အတွက် လိုအပ်လာတက်ပါတယ်။ဘလော့ရေးနေတဲ့ ကျနော် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ developer
တွေအတွက်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ဖုန်းရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ ဓါတ်ပုံ
ပြန်ရိုက်လို့ရတယ်။ဖုန်းရဲ့ original ပါတဲ့ function မျိုးလေးပဲ သုံးလို့ကောင်းတယ်။
Screen shot ရိုက်ပြီးတော့ မိမိ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံကို ပြန်ပြီးတော့ Edit လုပ်လို့ရတယ်။
အသုံးပြု့စရာ ၂ ခု့ပဲ နှိပ်ပေးရမယ်
စတင်အသုံးပြု့တော့မယ် ဆိုရင် start capture လေးကို နှိပ်ပေး၇မယ်
( ၁ )Volume down နဲ့ power ခလုတ် ကိုတပြိုင်နက်တည်းနှိပ်ပေးရမယ်။
နှိပ်ပြီး ပြီးချင်း လက်ကလည်း တခါတည်းလွှစ်မပစ်နဲ့နော် သူရိုက်ပြီးတဲ့အထိတော့
( ၂ ) သူရဲ့ shotcut icon လေး ကို နှိပ်ပေးပြီးရိုက်လို့ရတယ်
မိမိ screenshot ယူပြီးသား ပုံတွေကိုလည်း sdcard/easyscreenshot မှာ
Back Ground Themes ကိုလည်း ပုံစံ အရောင် ၃ မျိုး ပြောင်းလို့ရတယ်
သစ်သားရောင်၊အမည်းရောင် နဲ့ ငွေ ရောင် တို့ပါတယ် ဒါကြောင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ
အရောင်တွေကို setting ထဲမှာဝင်ပြောင်းပြီး အသုံးပြု့လို့ရတယ်
Easy Screenshot gives you the easiest way to take screenshots.1. You can takeascreenshot with just one tap on the screen or press power button and volume down button at the same time, or press power button and home button at the same time.
Note: If your phone's OS is under 4.0 and is not rooted, this app will not be able to capture image
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/20/2013 04:07:00 pm